>Poem- Tin Ko Min Nyo | MoeMaKa Burmese News & Media
>Poem- Tin Ko Min Nyo
သစ္စာရှာရာ … လမ်း
ဇွန် ၂၃၊ ၂၀၁၁
စ္စုပ္ပန်တည့်တည့်က နည်းလမ်းဖြစ်တယ် …။
အသက်နဲ့ ရင်းရတာချည်း …။
မျှော်ရည် စီရင်ထားတာဖြစ်တယ် …။
ချစ်သင့်တဲ့ သေနတ်တွေအတွက် ခွန်အား
မုန်းသင့်တဲ့ သေနတ်တွေအတွက် အဖျက်အား
အပ်ကျမတ်ကျ သိတယ် မေမေ …။
ပန်းချီ – နွေဦးအိုဝေ ကဗျာစာအုပ်မျက်နှာဖုံးပါ ပန်းချီအားအသုံးပြုပါသည်။
>Cartoon Saw Ngo - Free all political prisoners
Maung Yin Nga Tay - Articles
>Cartoon Saw Ngo – Who’s turn?
နှင်းမှုန်တွေကြားက တရုတ်ပြည်ကြီး - အပိုင်း (၁)
မောင်ဥက္ကလာ - ကြက်မင်းသမီး၊ မှားချက်နဲ့ စူပါမင်း (ထွေထွေရာရာ ဤကမ္ဘာ)
>treasure of my life, poems from my heart - 05
ဂျော်ဒီး - မိုးမခရွာ..ထွေလီကာလီ ဈေးဂေဇက်
>စကဿာပူတငြ် ကဵင်းပမည့် အာဆီယံညီလာခံသိုႚူမန်မာမဵားက အဆိုတင်သငြ်းမည်
ကာတွန်း ဖိုးဇော်(လှိုင်သာယာ) - တုံးခုလို့ လှမ်း
ကာတွန်း စောငို - ပြည်သူဘက်က သူရဲကောင်း ...
သျှင်မိုးပြေး ● ဒီဓါတ်ခွဲခန်းမှာ ကိုယ်ဟာ ပိုလျှံပစ္စည်း https://t.co/OkkYkAk0Y8 https://t.co/pcMEKgh9gc about 10 hours ago ReplyRetweetFavorite
လွင် (ဘော်တွင်း) ● ချစ်သူနှင်းဆီ https://t.co/pAdrAeFaxC https://t.co/Qk0ad1oKDM about 10 hours ago ReplyRetweetFavorite
ဇင်လင်း ● အပြုတ်တိုက်မည်ဆိုသော စိတ်ဓါတ်မျိုးဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ရမည်ထင်နေသလား https://t.co/tz4M5Jy5KM https://t.co/7quo8ratHP about 20 hours ago ReplyRetweetFavorite
ကာတွန်း ကိုခေတ်ရဲ့ နားပဲ နားစေ …. https://t.co/ke5vmBc3dz https://t.co/vdnBJwHv30 about 20 hours ago ReplyRetweetFavorite